Maitiro mumusika wemasheya uye maitiro ekushandisa mavari | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemakiyi ekuita kuchengetedza kubudirira kunobatsira iri mukuziva kududzira maitiro uye kushanda mavari nenzira kwayo. Izvo hazvigone shanda zvakafanana mune ese maitiro sezvo ichave pasipoti yakajeka kuti uwane kutadza kana chii chakafanana: siya ma euro mazhinji munzira. Ehezve, haisiriyo nzira imwechete iyo inofanirwa kushandiswa mukukwiridzira senge mune yekuderera. Kana zvisiri, pane kudaro, hapazove nesarudzo kunze kwekuziva kusiyanisa navo kuti vaite nzira inokunda. Ndokunge, shure kwezvose, chinangwa chikuru chevashambadzi vadiki nepakati.
Kubva pane iyi nzira yekutanga, hapana mubvunzo kuti zvinoitika mumisika yequity zvinokupa iyo nhungamiro dzekuita kugadzira mari nekukwirira zvivimbiso zvekubudirira. Nekuti zvirokwazvo, kana iwe ukashandisa iyi nzira yekudyara zvine mutsindo, iwe haungogone kungova mune iri nani nzvimbo yekuita yako yemusika wemasheya zvirevo zvive zvinobatsira. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unenge uchinge uchichengetedza nzvimbo dzako pamusoro pezvimwe zvinhu. Kunyanya kana misika yemakambani isiri kuenda panguva dzakanakisa dzenguva.
Kuti uite iyi ongororo system, iwe uchafanirwa chete kupa yakakosha dosi yechirango kuti utange mashandiro. Ivo havafanirwe kubva muhombodo, asi zvakare vanoshanda kune mimwe misika yezvemari, kunyangwe dzimwe dzakasarudzika. Nekuti pakupera kwezuva zvazviri ndezvekuti gore rega rega chirevo chako chemari chinokura zvishoma nezvishoma. Ichi ndicho chinangwa chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Mune ino kesi kuburikidza neakasarudzika zano, asi panguva imwechete yakapusa.
1 Maitiro: zvekuita neiyo yekusimudzira?
2 Bearish misika: ine dzimwe njodzi
3 Gare gare: iyo yakakanganwa maitiro
4 Zvigadzirwa zveyese maitiro
5 Hapana kufamba kwemutengo
6 Maitiro anochinja
Maitiro: zvekuita neiyo yekusimudzira?
Ehezve, iyi ndiyo mamiriro anodiwa kwazvo kune wese munhu nekuti zviri nyore kwazvo kuita kuti mari ibatsire. Mukukwira kumusoro, njodzi dzakaderera zvakanyanya uye uchafanira kungotevedzera maitiro emisika yemari. Nechezvakanakira kuti ihurongwa hwekudyara iyo inoshanda kwenguva dzese dzekusingaperi: pfupi, yepakati nepakati. Nenzira iyi, chimiro chaunopa sewe investor hachina basa nekuti maitiro acho anowanzo kuperekedza iwe mukufamba kwako mumusika wemasheya.
Mune ino pfungwa, iwe haugone kukanganwa kuti maquity anga ari mune yekumusoro kweanoda kusvika makore gumi. Kubva pakutanga dambudziko rehupfumi muna 2007 na2008. Chero zvazvingava, hadzisi nzira dzese dzekusimudzira dzakagara-refu seichi uye nguva yadzo kazhinji zvinoenderana nemisiyano yakawanda yezvehupfumi. Kungoratidza kuti kana zviratidzo zvekutanga zveutera zvikaonekwa mumisika yezvemari, isu tinofanirwa kutanga ratidziro yekubuda munzvimbo dzedu mumakambani.
Bearish misika: ine dzimwe njodzi
Hapana mubvunzo kuti mune yekudonha zvakanyanya kuomarara kushanda. Njodzi dzinotengeswa pamusika wemasheya dzinoenda zvisirizvo zvakanyanya kunonoka. Iwe une mukana wakawanda wehurema huri kuiswa mune yako mari chirevo. Neichi chikonzero zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe chengeta mune zvemari sefomura yekudzivirira yako mari. Hapana chinoitika nekuti hauna mari yako yawakaisa mari. Uye zvakare, iwe uchagara uine zviwanikwa zvemabhengi zvigadzirwa (yakatemwa-temendi dhipoziti, akakwira-mibairo maakaundi kana emakambani zvisungo).
Kutengesa mu downtrends kunofanirwa kunge kuri panguva kupfuura chero chinhu. Semuenzaniso, kutora mukana wekudzokerwa kunowanikwa nemisika yemari uye uko mamwe acho aine nguva yakakodzera kutariswa. Zvakare iyo intraday mashandiro kana kugadzirwa muchikamu chimwe chete chekutengeserana unogona kukwidziridza mari dzako. Kunyangwe mune ino modality yekupedzisira iwe unoda kudzidza kwakakura kugadzirisa iyo yekupinda uye yekubuda mitengo. Chero zvazvingaitika, hapana mubvunzo kuti iri kupokana neyakajairwa uye izvi zvinogara zvichikuvadza zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Vane zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana uye izvi zvinofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi.
Gare gare: iyo yakakanganwa maitiro
Vazhinji vatengesi vanokanganwa kuti hunyowani zvakare hunhu. Ehe, hongu, uye iwe unofanirwa kuziva mashandiro aungaita mune ino mamiriro. Kunyangwe mikana yekuzadzisa mibairo mikuru iri pasi zvakanyanya. Kwete pasina, margins ekuita iwo akanyanya kuderera pane mune mamwe maitiro. Ndokureva, kuti muiyo bearish uye yekusimudzira uye ichi chinhu chaunofanirwa kufungidzira kubva panguva ino chaiyo. Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti iyo yekupedzisira maitiro inowanzoitika kune pfupi-kwenguva mashandiro. Iko mukati memazuva mashoma iwe unogadzirisa zvigaro pasina kumirira kumwe kufamba mumisika yequity.
Kubva pane ino yakaoma mamiriro, iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuve wakawanda kunyanya kusarudza mune zvakataurwa zvakasarudzwa. Kusvika pakuti iwe unozomanikidzwa nekudikanwa kuti uite mishoma mishoma pamusika wemasheya pane zvaitarisirwa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kuve unongwarira zvakanyanya mukutenga kwauchazoita pasi peichi chiitiko chakakosha. Hazvishamisi kuti chero kusarongeka kunogona kukubhadharira zvakanyanya nenzira yekurasikirwa mune zvako zvinhu. Iwe haugone kukanganwa, kune rimwe divi, kuti kushanda mune yekupedzisira maitiro ndiko kufamba kwakanyanya kuomarara mumisika yemari iwe yaunogona kuva nayo panguva ino.
Zvigadzirwa zveyese maitiro
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akateedzana ezvigadzirwa zvemari zvinonyanya kufadza kushandisa mune yega yeaya maitiro ataurwa pamusoro. Ivo vanogona kukubatsira iwe kuendesa investments nenzira yakachengeteka zvakanyanya uye pasina kurega zvachose. Unofanira chete vashande panguva yakakodzera uye nenguva yakafanira. Zvakanaka, sekutaura kunoita varimi, munyika yemari pane mikana yebhizimisi nguva dzose, pasina chero rudzi rwezvirambidzo kana kusakwana. Izvo zvinongova zvakakosha kuti iwe uzive maitiro ekuzvishandisa panguva chaiyo uye uine zvakanakisa zvivimbiso zvekuti iwe unenge usina kuita chikanganiso mukusarudza iyo yemari nhumbi.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, hapana mubvunzo kuti dzimwe nzira huru dzinoitika mukukwira kwenzira yemisika yemari. Zvinenge zvese zvigadzirwa zvinokosheswa kwauri kuti uite purofiti ichengetedze nekuwedzera kana zvishoma kuchengetedzeka. Imwe nyaya yakatosiyana ndeye inoitika mune yakanyanya kuomarara downtrend, uko chete vashoma vanozadzisa ichi chinangwa chakakosha. Nekuti zvirizvo, izvo zvinonzi zvinodzosera kumashure zvigadzirwa ndizvo zvakanyanya kukodzera kuisa mari yako mukuchengetedza panguva dzino dzisina mubhadharo. Zvese zviri zviviri maererano nekutenga chaiko uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya uye mari yekudyara.
Hapana kufamba kwemutengo
Pane zvinopesana, kana mitengo yemisika yemari ichifamba neushoma, hapazovi nesarudzo kunze kwekurodza hunyanzvi hwekuzadzisa zvinangwa zvako zviripo uye nepfungwa iyi pane mashoma zvigadzirwa zvemari izvo zvinokosheswa newe kubva pane izvo nguva. Pakati pavo pane iyo mari yemari ndidzo dzinokutendera kuti uite nekukurumidza mumisika. Kunyangwe paine njodzi iri pachena yekukanganisa mukufunga, chimwe chinhu chinowanzoitika kuitika pane imwe nguva muhupenyu hwako.
Zvakare havagone kukanganwa kubhadharwa kweimwe chigadzirwa chekubhengi chekuchengetedza kunzvenga kushomeka kwetsananguro yemisika yemari. Ivo vanozokupa iwe nekudzoka kushoma, asi zvirinani iwe unenge uchikunda mune ino yakasarudzika kusangana. Kune rimwe divi, kune mamwewo nguva inoshandiswa iyo inogona kuzivisa zvishoma kupfuura 1% mumwedzi mishoma. Ehezve, hazvina kuwanda, asi zvirinani kuti haufanire kufunga nezvekukosha kwehombodo iwe yauchachengeta yako yemari mipiro. Chero zvazvingaitika, kuverengera zvakare kune mukana mune yekudyara chikamu.
Njodzi huru mukufamba ndeye kana shanduko ikaitika. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusarongedzesa kudyara kwako uye kurasikirwa nemari yakawanda mazviri, kupfuura zvaunogona kufungidzira panguva ino. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuve nehanya nekuona shanduko yemitengo ye ona chero shanduko kana kugadziriswa kwayo. Ose ari maviri kubva kune bullish kune bearish kana zvinopesana, kunyangwe njodzi hombe inouya kubva pakutengesa kwekutanga.
Naizvozvo, hauzove nesarudzo kunze kwekungwarira kupfuura nakare kese uye nekuteerera kumasaini anopihwa nemisika yemari. Mune imwe nzira kana imwe uye kuti kuburikidza nemifananidzo iwe unogona kuve nechishandiso chine simba chekuvaona pamwe nekutarisira, izvo, shure kwezvose, zvazviri nezvazvo. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Chero zvazvingaitika, hazvizove nyore kwauri uye shanduko yemafambiro haisi nguva dzose inhau dzakanaka dzenzira dzako dzekudyara Nekuti iwe uchafanirwa kugadzirisa zvinhu zvakawanda mumasisitimu anoshandiswa kuita kuti mari ibatsire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Misika yemusika wemasheya uye maitiro ekuvatengesa
Chii chinonzi SWAP?